Tetikasam-pamokarana mahery vaika amin'ny tranokala ho an'ny orinasanao araka ny Semalt
Na tsy maintsy mampiasa ny angon-drakitra momba ny raharaham-barotra na fikarohana na asa ianao, Tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny miandry pejy ho entina ao amin'ny Netscape Navigator na Internet Explorer. Raha mikaroka ny aterineto ianao, dia mety hiatrika ny olana amin'ny fifandraisana mangatsiaka ary mety hamoy ny ankamaroan'ny angona izay ilainao. Raha mijery tranokala mavesatra na blôgy misy pejy an'arivony ianao, dia mila manindry im-betsaka ny totozy ianao mba hahazoana ireo pejy misokatra tsara. Soa ihany, fandaharanasa manokana momba ny tsindrin-tsakafo manokana dia mahatonga anao ho mora kokoa ny mandefa ny toerana tianao indrindra tsy misy olana. Ny tranonkala iray manokana dia programa iray manokana izay manampy ireo mpikaroka, mpanao gazety, mpianatra, mpandraharaha ary mpandraharaha ara-barotra mba hanangona ireo angona azo tsapain-tanana sy hijery ireo tranonkala samihafa amin'ny haavo. Ny sasany amin'ireo fitaovana azo itokisana indrindra dia voafaritra eto.
SurfOffline no iray amin'ireo aterineto tsara indrindra sy malaza indrindra amin'ny aterineto. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity dia azonao atao ny manapa-kevitra hoe firy ny zavatra tianao halefa, ary tsy misy fetrany ny isan'ireo pejy tokony alaina. Ary koa, tsy mila FTP ianao ao amin'ny tranonkalanao mba haka ny angona. Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny Windows, Vista, XP ary rafitra hafa fiasa hafa.
Io dia iray amin'ireo fandaharana mahazatra indrindra amin'ny Internet. Ny tranonkala eXtractor dia tsara ho an'ny mpandrindra ny programa sy ny mpandrindra tsy fandaharana ary mahatonga ny fikarohana an-tserasera ho mora sy haingana. Azonao atao ny maka ny tranokala manontolo na ny ampahany aminy amin'ny alalan'ity fitaovana mahery ity..Fantatra amin'ny serasera eo amin'ny mpampiasa azy sy ny fanaraha-maso izay manampy anao hanangana sy handrindra ny angona amin'ny fomba tsara kokoa. Website eXtractor dia mifanaraka amin'ny dikan-teny Windows sy iPhone rehetra.
Situcker dia indrindra indrindra ny programa Mac izay manampy ny tranonkala ary mampiova ny fifandraisana amin'ny Internet. Azonao atao ny mamaky mora foana ireo pejy, sary, endri-tsoratra sy pdf izay ao anaty fiara sarotra ho an'ny fampiasana ivelan'ny aterineto. Mila miditra ao amin'ny URL ao amin'ny tranokala SiteSucker ianao, ary dia hidina avy hatrany ny angona angon-drakitra. Ity programa ity dia mitaky Mac OS X 10.11 ary azo alaina ao amin'ny tranokalan'ny SiteSucker.
Grab-a-Site dia iray amin'ireo fitaovana mahery vaika Izy io dia miasa ivelan'ny aterineto sy an-tserasera ary afaka mamorona tranokala imbetsaka, miaraka amin'ireo rakitra manohana azy toy ny sary, sary, rakitra feo ary lahatsary. Ity fitaovana ity koa dia afaka maka tahiry avy amin'ny tranonkala samihafa amin'ny fotoana iray, mamonjy fotoana sy hery be dia be. Azo ampiasaina amin'ny ASP, PHP, Cold Fusion ary JR ny fiteny ary afaka mamadika azy ireo ho HTML. Ity programa maimaim-poana ity dia miasa amin'ny Windows 7, Vista, XP, Windows Me, ary Win98.
Ny tranokala vao haingana Blue Squirrel dia antsoina hoe WebWhacker 5. Afaka manapika tranokala iray manontolo ao anaty rakitra sarobidy ho an'ireo mpampiasa aterineto ary manompo amin'ny fampiofanana toerana ho an'ny mpampianatra sy mpianatra. Mora ny manangana sy manara-maso ny angon-drakitrao ho an'ny kalitao, mandamina sy manavao azy araka izay takinao. Ankoatra izany, ny WebWhacker dia afaka manamboatra ny tranokalan'ny tranokala ao amin'ny tranokalanao ary mifanaraka amin'ny Vista, XP sy Windows 7 Source .